War - SIDEE LOOGA BADBAADiyaa NAFTAADA & KUWA KALE
SIDEE LOOGA BADBAADI KARAA NAFTAADA & DADKA KALE
Ogow sida ay u faafto
Xilligan ma jiro tallaal looga hortago cudurka coronavirus 2019 (COVID-19).
Sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo jirro waa in laga fogaado la-qaadsashada fayraskan.
Fayraska waxaa loo maleynayaa inuu ku faafo qof ahaan ilaa qof.
Inta udhaxeysa dadka sida dhow iskugu dhow (qiyaastii 6 fuudh).
Iyada oo loo marayo dhibcaha neef-mareenka ee soo baxa marka qof cudurka qaba qufaco, hindhiso ama hadlo.
Dhibco-yaashani waxay ku soo degi karaan afka ama sanka dadka ka agdhow ama ay suuragal tahay in sambabada laga neefsado.
Daraasadihii ugu dambeeyay qaarkood waxay soo jeediyeen in COVID-19 ay ku faafi karaan dadka aan calaamado muujinayn.
Qofkasta Waa Inuu
Dhaq gacmahaaga badanaa
Ku dhaq gacmahaaga inta badan saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi gaar ahaan ka dib markaad joogtid goob dadweyne, ama ka dib markaad sanka ka dhufato, qufacdo, ama hindhisooto.
Gaar ahaan waa muhiim in la dhaqo: Haddii saabuun iyo biyo aan si fudud loo heli karin, isticmaal gacmo nadiifiye oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo. Ku dabool dhammaan gacmaha gacmahaaga oo isku xoq ilaa ay ka dareemayaan qalalan.
Kahor cunista ama diyaarinta cuntada
Kahor intaadan wajigaaga taaban
Ka dib markaad isticmaasho qolka nasashada
Ka dib markaad ka tagto goob fagaare ah
Ka dib markaad sanka ka garaacdo, qufacdo, ama hindhisooto
Ka dib markii aad maaskarada taabatay ka dib
Ka dib markaad bedesho xafaayad
Kadib daryeelida qof jiran
Ka dib markaad taabato xayawaanka ama xayawaanka guriga
Iska ilaali inaad taabato indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga gacmo aadan maydhin.
Gudaha gurigaaga: Ka fogow xiriir dhow oo aad la leedahay dadka jiran.
Haddii ay suurogal tahay, ku hay 6 fuudh inta u dhexeysa qofka jirran iyo xubnaha kale ee guriga.
Bannaanka gurigaaga: Dhex dhig 6 fuudh oo masaafada u dhexeysa naftaada iyo dadka aan reerkaaga ahayn. Waxaad ku fidin kartaa COVID-19 dadka kale xitaa haddii aadan xanuun dareemin.
Xusuusnow in dadka qaar oo aan lahayn astaamo laga yaabo inay awoodaan inay faafiyaan fayras.
Ka jooji ugu yaraan 6 fuudh (qiyaastii 2 gacmood ') dadka kale.
Ka fogaanshaha dadka kale waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka halista ugu jira inay aad u bukoodaan.
Maaskarada waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo dadka kale haddii aad cudurka qabtid.
Qof kastaa waa inuu xirtaa maaskaro marka lagu jiro goobaha dadweynaha iyo marka la joogo dadka aan ku noolayn gurigaaga, gaar ahaan marka tallaabooyinka kale ee kala fogaynta bulshada ay adag tahay in la ilaaliyo. Xilligan, maaskarada qalliinka iyo Niraamyada N95 waa sahay muhiim ah oo ay tahay in loogu talogalay shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo kuwa kale ee ugu horreeya ee ka jawaaba.
Maaskarada waa in aan la dul saarin carruurta yar yar ee ka yar 2 sano, qof kasta oo dhibaato ku qabta neefsashada, ama miyir la ', aan awood u lahayn ama haddii kale aan awoodin inuu iska saaro maaskaro caawimaad la'aan.
Sii wad inaad haysatid ilaa 6 fuudh naftaada iyo dadka kale. Maaskaro ma aha bedelka fogeynta bulshada.
Had iyo jeer ku dabool afkaaga iyo sankaaga maro markaad qufacayso ama hindhisayso ama aad isticmaaleyso xusulka gudihiisa hana tufin.
Ku tuura unugyada la isticmaalay qashinka.
Isla markiiba gacmahaaga ku dhaq saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 ilbidhiqsi. Haddii saabuun iyo biyo aan si fudud loo heli karin, ku nadiifi gacmahaaga nadiifiye gacmeed oo ay ku jiraan ugu yaraan 60% aalkolo.
Nadiifi IYO jeermiska dusha jeermiska la taabto maalin kasta. Tan waxaa ka mid ah miisaska, albaabbada albaabbada, shidmooyinka nalka, miisaska miiska, gacmaha, miisaska, taleefannada, teebabka, musqulaha, qasabadaha, iyo saxanka.
Haddii dusha sare ay wasakh yihiin, nadiifi. Isticmaal saabuun ama saabuun iyo biyo jeermiga jeermiska ka hor.
Kadib, isticmaal jeermiska guryaha lagu dilo. Astaamaha jeermiska guryaha ee diiwaangashan guryaha ee 'EPA' ee ugu caansan ayaa shaqeyn doona.
Ka feejignow astaamaha. U fiirso qandho, qufac, neef-qabasho, ama calaamadaha kale ee COVID-19.
Gaar ahaan muhiim ahaan haddii aad wado hawlo muhiim ah, aadista xafiiska ama goobta shaqada, iyo meelaha ay ku adkaan karto in laga fogaado masaafo dhan 6 fuudh.
Qaado heerkulkaaga haddii calaamaduhu soo baxaan Raac tilmaamaha CDC haddii calaamaduhu soo baxaan.
Ha ku qaadin heerkulkaaga 30 daqiiqo gudahood jimicsiga ama ka dib qaadashada daawooyinka yareyn kara heerkulkaaga, sida acetaminophen
Ku daboolo afkaaga iyo sankaaga maaskaro markii aad dadka kale la joogto
Nadiifi oo jeermiska dil
La soco Caafimaadkaaga Maalin kasta
Ilaali Caafimaadkaaga Xilligan Ifilada ah
Waxay u badan tahay in fayrasyada ifilada iyo fayraska keena COVID-19 ay labaduba faafin doonaan deyrta iyo jiilaalka. Nidaamyada daryeelka caafimaad ayaa laga yaabaa inay buux dhaafiyaan daaweynta labada bukaan ee qaba hargabka iyo bukaannada qaba COVID-19. Tan macnaheedu waa helitaanka tallaalka hargabka inta lagu jiro 2020-2021 waa ka muhiimsan tahay weligeed.
In kasta oo qaadashada tallaalka hargabku uusan ka difaaci doonin COVID-19 waxaa jira faa'iidooyin badan oo muhiim ah, sida:
Tallaalada hargabka ayaa la muujiyey inay yareynayaan halista jirrada hargabka, isbitaalka la dhigo, iyo dhimashada.
Qaadashada tallaalka hargabku sidoo kale waxay badbaadin kartaa ilaha daryeelka caafimaad ee loogu talagalay daryeelka bukaannada qaba COVID-19.